Warbixin sir ah: Askarigii ay sii deysay Daalibaan ayuu tababaray! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Washington – Mareeg.com: Dukumiintiyo sir ah oo la helay ayaa sheegaya in askari Mareykan ah oo dhawaan Daalibaan sii deysay uu Islaamka qaatay intii uu afduubnaa xarkada Daalibaan ee dalka Afgaansitaan.
Dukumiintiyadan sirta ah oo Mareykanku leeyahay ayaa xustay in askarigii Mareykanka ahaa ee Daalibaan ku badelatay 5 ka mid saraakiisheeda oo u xirnaa Mareykanka uu tababar siin jiray dagaalyahanada Daalibaan ee dalka Afgaanistaan.
Saajinkaan Mareykanka ah ee dhawaan la sii daayey ayaa sanadkii 2009 la waayey isagoo kaligiis mushaaxayey waddooyinka caasimadda Afgaanistaan ee Kabul, waxaana markii dambe la ogaaday in Daalibaan afduubtay.
Askarigaan Mareykanka ah ayaa markii Daalibaan afduubtay la sheegay inuu xiriir wanaagsan la yeeshay raggii afduubay, islamarkaana uu isugu magaac dara “Mujaahid”.
Waxaa warbixinta sirta ah ee Mareykanka lagu sheegay in askarigaas Daalibaan u ogolaatay inuu hub heysto iyo inuu tago xerooyinka tababarka, isagoo halkaas tabarro ka bixinayey muddo dheer.
Khubaro dhanka Cilmu Nafsiga qaabilsan ayaa FOX NEWS u sheegay in xaaladda nuucaan ah lagu arko dadka la heystayaasha, si ay ugu dedaalaan iney is badbaadiyaan.
Warbixinta sirta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in sajinkaani uu bishii June ee sanadkii 2010 isku dayey inuu baxsado, iyadoo markaas kadib lagu ciqaabay todobaadyo uu ku jiray xabsi mugdi ah oo eg meelaha xayawaanka lagu xareeyo.
Markii uu xabsiga ka baxsan waayey ayaa sajinkaan Mareykanka ah bilaabay sida warbixinta lagu sheegay inuu isu dabciyo Daalibaan, islamarkaana ku salaamo salaanta Islaamka ee ay isku salaamayaan, taasoo sida la leeyahay keentay inuu la saaxibo ragii afduubay.
Dhinaca kale laamaha amaanka Mareykanka ayaa baaraya handadaado 4 ah oo loo soo diray askarigan Mareykanka ah ee Daalibaan sii deysay todobaadkii hore.
Saajinkaan Mareykanka oo Daalibaan heystay tan iyo sanadkii 2009 ayaa todobaadkii hore la sii daayey, iyadoo Mareykanku dhankiisa daayey 5 ka mid ah Daalibaan. Dowladda Qadar ayaa dhexdhexaadisay heshiiska maxaabiis is dhaafsiga.
Gole dalbaday in Atam loo gacan geliyo Puntland